सुनुवाइमा एमाले र एमाओवादी एकातिर-NepalKanoon.com
सुनुवाइमा एमाले र एमाओवादी एकातिर
जेठ ४, काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणबारे छलफल गर्न आयोजित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संविधान र कानून राम्रोसित पढ्न अन्य सभासदलाई आग्रह गरेपछि केहीबेर हंगामा भयो ।
सभासद श्रेष्ठको बोली भुइँमा झर्नासाथ एमाले सभासद भीम रावल जंगिए-’संविधान र कानुन कसले पढेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ? यसमा मेरो आपत्ति छ ।’ रावल जंगिएपछि करिब दुई मिनेट समितिको बैठकमा बाझाबाझ भयो । झगडामा एमाले र एमाओवादीका सभासद एकातिर, कांग्रेसका सभासद अर्कातिर बने ।
त्यसपछि श्रेष्ठले आफूले कानून पढ्नुस् भनेर आग्रह मात्र गरेको भनेर सच्याए । केहीबेर चलेको बैठक सोमबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
चर्को विवाद र प्रतिवादका वीच सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा न्यायपरिषदले लेखेको पत्रमा प्रयोग गरिएको भाषालाई लिएर विवाद चर्किएको थियो । एमाले, एमाओवादीसहितका दलका सभासदहरुले न्याय परिषद्ले संसदलाई चुनौती दिएको बताए । कांग्रेसका सभासद प्रकाशशरण महतलेसमेत न्यायपरिषदको पत्रमा उल्लेखित भाषामा गल्ती भएको बताए थिए ।
के छ न्यायपरिषदको पत्रमा ?
संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार न्यायापरिषद संसदप्रति उत्तरदायी नहुने तर्क गरिएको छ । संसदीय समितिले बोलाउँदै न्यायपरिषद आउनुनपर्ने जिकिर पत्रमा गरिएको छ ।
आइतबार बिहानैदेखि बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा कांग्रेसका सभासदहरुले न्यय परिषदको बचाऊ गर्ने प्रयास गरेका थिए । समितिको बैठकमा न्यायपरिषद सदस्यलाई बोलाउन नमिल्ने तर कानूनमन्त्रीसम्म बोलाउन सकिने कांग्रेस सभासदको तर्क थियो ।
कांग्रेस सभासद चीनकाजीले बोल्दा विवाद भएपछि एमाले सभासद राजेन्द्र पाण्डे बैठक अघि बढाउन सभापति कुलदबहादुर गुरुङलाई आग्रह गरेका थिए । न्यायपरिषदलाई समितिमा बोलाउने निर्णय सर्वसम्मत पाण्डेले बैठकमा बताए । परिषदले संसदीय समितिलाई उपदेश दिन खोजेको भन्दै पाण्डेले अनुहार हेर्न उनीहरुलाई नबोलाइएको बताए । अनुहार हेर्न बोलाएका हैनौं । ‘अनुहारमात्रै हेर्ने हो भने गोरखापत्रमा न्यायाधीशको फोटो छापौं र त्यही हेरौैं’ पाण्डेले बैठकमा भने ।
बैठकमा बोल्दै एमाओदी सभासद अग्नि सापकोटाले न्यायपरिषदको पत्रमाथि आपत्ति जनाए । यसलाई स्वीकारेर जाने हो भने अन्य संवैधानिक अंगले पनि संसदलाई नटेर्ने भन्दै सापकोटाले प्रश्न गरे- ‘देश जनप्रतिनिधिले चलाउने हो कि अरु कुनै निकायले ?’
यदि आवश्यक पर्छ भने यसबारे संविधानसभाका अध्यक्षलाई समेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने सापकोटाले बताए । एमाओवादीका अर्का सभासद टोपबहादुर रायमाझीले संसदलाई न्यायपरिषदले चुनौती दिन खोजेको बताए ।
त्यसैगरी एमाले सभासद युवराज ज्ञवालीले अब कस्तो संविधान बनाउने भन्नेबारे यो घटनाले पाठ सिकाएको भन्दै न्यायपरिषदको सिफारिसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए । न्यायपरिषदका सदस्य संसदीय सुनुवाइमा बोलाउन नपाइने हो भने प्रधान न्यायाधीशलाई यसअघि संसदीय सुनुवाइमा बोलाउनु पनि गल्ती ठहरिने ज्ञवालीको तर्क थियो ।
एमाओवादीका प्रभु साहले पनि ज्ञवालीको भनाइमा समर्थन गर्दै न्यायपरिषदको निर्णयलाई अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
एमाले नेता भीम रावलले न्याय परिषदबाट यस्तो स्तरको पत्र देखिनु गलत भएको बताए । यस्तो पत्र लेखिएकोमा समितिले आपत्ति जनाउने गरी प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने रावलले बताए । ‘परिषदलाई बोलाउन मिल्दैन भन्ने संविधानको कुन धारमा लेखिएको छ ? चिठी लेख्ने व्यवस्था कुन धारमा गरिएको छ ?’ रावलले बैठकमा प्रश्न गरे ।
एमाले अर्का सभासद भानुभक्त ढकालले संसदीय समितिलाई न्यायपरिषले उपदेश दिन खोजेको बताए । उनले भने- ‘न्यायपरिषद सर्वोच्च अदालत होइन, कसलाई के गर्ने भन्ने उसँग सुझाव मागिएको थिएन ।’ संविधान र कानून भन्दा बाहिर जाने हो भने महाअभियोग लगाउनुपर्ने स्थिति आउने भन्दै उनले यसले दलहरुलाई विभाजित गर्ने र संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रकाशशरण महतले सुनुवाइको शुरुवात नै पूर्वाग्रही भएको बताए । कानूनी आधार नै नहेरी हतारमा न्यायपरिषदलाई बोलाउने निर्णय गरिएको महतको भनाइ थियो । उनले न्यया परिषद सदस्यलाई बोलाउन नमिल्ने तर, कानूनमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिने आफ्नो धारणा बैठकमा राखे ।
बैठकमा कांग्रेसका आरजू देउवा, चीनकाजी श्रेष्ठ, हृदयराम थानी र बद्री पाण्डे, अम्बिका बस्नेत लगायतले मन्त्रीलाई बोलाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । राजकुमार श्रेष्ठ Onlinekhabar.com